“Grant Xhaka waxba kama duwana ciyaaryahanka Stoke Charlie Adam” Neil Lennon oo ka yaabiyey caalamka. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » “Grant Xhaka waxba kama duwana ciyaaryahanka Stoke Charlie Adam” Neil Lennon oo ka yaabiyey caalamka.
“Grant Xhaka waxba kama duwana ciyaaryahanka Stoke Charlie Adam” Neil Lennon oo ka yaabiyey caalamka.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 20-06-16 1:06 PM Inta badan dadka jecel daawashada ciyaaraha ayaa sheegayo in ciyaaryahanada qaar ay ka sameynayaan bandhig wanaagsan koobka waqti xaadirkan ka socda dalka France ee Euro 2016 ka, ciyaaryahanada wacdarada ka dhigaya waxaa kamid ah xidiga cusub ee kooxda Gunners ka Granit Xhaka.
Balse qubarada qaar ayaa amisan wax ay inta badan dadka qaar ay aminsan yihiin waxaana ka mid ah Neil Lennon dadka ra’yigaas kasoo horjeeda.
Xhaka waxa uu kamid ah ciyaaryahanada fara ku tiriska ah ee bandhiga wanaagsan ka sameynayo koobka Euro 2016 ka, waxa uuna kamid ah xidigaan ciyaaryahanada ugu sareeya xulka Switzerland oo kamid noqday xulalkii ugu horeeyey ee usoo baxay wareega 16 ka.
23 Sanno jirkan ayaa ugu soo wareegay kooxda ka dhisan Emirates Stadium aduun dhan 34 Milyan oo ginni.
“Ulama yaabin sida ay dadka qaar ay ula yaabeen Xhaka, aniga waxa uu isoo xusuusiyaa Charlie Adam”. Macalinkii hore ee Bolton Lennon ayaa sidaas u sheegay BBC Sports.
Ciyaaryahanka qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Stoke City Charlie Adam ayaa kusoo bilowday kaliya 13 ciyaarood kulamadii ay ciyaartay kooxda uu leyliyo Mark Hughes, ciyaaryahankii hore ee Liverpool ayaana nasiib u yeelan inuu kamid noqdo ciyaaryahanada matalayey xulka Scotland.